Dilaagii Muqdisho Macallin Ilkacase iyo xubno kale oo dil toogasho lagu fuliyey | Xaysimo
Home War Dilaagii Muqdisho Macallin Ilkacase iyo xubno kale oo dil toogasho lagu fuliyey
Dilaagii Muqdisho Macallin Ilkacase iyo xubno kale oo dil toogasho lagu fuliyey
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa saakay xukun dil ah ku fulisay Maxamed Xaaji Axmed oo caan ku ahaa (Macallin Ilkacase) iyo laba xubnood oo kale oo ka tirsanaa Al-Shabaab.
Ilkacase ayaa la rumeysan yahay inuu ahaa dilaagii ugu weynaa ee qarsanaa ee Muqdisho abid ay aragto, isaga oo shaqsiyaad badan oo isugu jira shacab iyo xubno dowladeed ku laayey dilal qorsheysan oo magaalada ka dhacay.
Maxamed Xaaji Axmed (Macalin Ilkacase), iyo laba kale oo Shabaab ah oo la shaqeyn jiray laguna kala magacaabo Axmed Maxamed Haashim iyo Saalim Siciid Maxamed, kuwaas oo lagu helay dilal kala duwan oo ay ka geysteen magaalada Muqdisho, ayaa lagu toogtay fagaaraha dugsiga tababarka Janeraal Kaahiye ee Iskuul Bulusiya.
Dowladda Soomaaliya ayaa barnaamij gaar ah ka diyaarisay Macalin Ilkacase), kaas oo uu ku qiranayay in uu ahaa sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo ka qeyb qaatay dilal dhowr ah, sidoo kale uu xilal kala duwan kasoo qabtay Al-Shabaab.
Ilkacase oo ahaa Macallin Jaamacadeed balse si hoose ula shaqeeyaa Al-Shabaab, ayaa axa uu madax ka ahaa unug dilaa ah oo Muqdisho ku laayey dad badan, waxaana markii la qabtay aad u yaraaday dilalka qorsheysan ee ka dhaca Muqdisho.